Shirkada Uber oo baabuur is wada ka bilaabaysa Pittsburgh ee Maraykanka - Hablaha Media Network
Shirkada Uber oo baabuur is wada ka bilaabaysa Pittsburgh ee Maraykanka
HMN:- Uber ayaa markii ugu horeysay ugolaan doonto macaamiisha inay isticmaalaan baabuur iswadaysa laba toddobaad gudaheed, sida shirkadda ay xaqiijisay.
Uber ayaa sheegtay in lagu bilaabi doono Pittsburgh, Pennsylvania ee Maraykanka. Waxay intaas ku dartay inay iskaashanayaan Volvo.
Marka ugu horaysa, baabuurta waxaa hagi doona darawal, oo waditaanka la wareegi doona hadii loo baahdo iyo kormeere, ayay sheegtay Bloomberg.
Shirkadda ayaa markii ugu horaysay sheegtay qorshahan laba sano ka hor.
In ka badan hal milyan oo qof ayaa wadda baabuurta Uber, laakiin si toos ah shaqaale uma aha.
“Afhayeenka Uber ayaa sheegtay in Pittsburgh, in macaamiisha ay u codsan doonaan baabuurta sida caadiga ahayd, iyagoo isticmaalaya Uber app, waxaana loo soo dirayaa baabuur iswada”. Tagaasida ayaa marka hore lacag la’aan ah, halka laga qaadi doono dadka sida cadadada ah $1.30 mile-kii.
Waxay intaas ku dartay in Volvo ay baabuur ay ku xiran tahay qalabka XC90 ee baabuurta isboortiga (SUV) ay u soo dirtay Uber.